२१ माघ, बिजौरी । ऋषि महर्षिहरुको तपोभूमि, सनातनधर्मको उर्वर क्षेत्र देवगणहरुको कृडास्थल, प्राकृतिक बरदानले भरिपूर्ण धर्म संस्कृतिको खानी तात्कालीन सिंजा राज्य अन्तर्गत पर्ने रुकुम जिल्लामा अवस्थित ऐतिहासिक पुण्यक्षेत्र हो । गोतामकोट जो संधैं पबित्र र पावन छ । उर्वर र सितल छ । जसको दर्शन मात्रले पनि मानसिक र शारीरिक …
२१ माघ, तुलसीपुर । म ८ कक्षामा पढ्दै थिएँ, मलाई भर्खरै जस्तो लाग्छ आमाले ‘नानी तँ छोरा भएर जन्मिएकी भए’ भनेको । त्यो वाक्यले मन मात्रै होइन मस्तिष्क पनि छोएको हुँदो हो सायद, त्यसैले होला म बिर्सन सकिरहेकी छैन । सम्झना छ अहिले पनि, त्यो बेलामा केही प्रतिक्रिया दिन सकिन …
१८ माघ, एजेन्सी– जीवनमा त्यस्तो मानिस को होला जसलाई अगाडि बढ्न मन नहोस् ? तर, कसैले पनि आफ्नो यात्रालाई अगाडि त्यति बेला मात्र लैजान सक्छ जब उसले आफूमा भएको ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सक्छ । जसले आफूभित्र भएको ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सक्दैन वा यसलाई प्रयोग गर्ने चाहना पनि राख्दैन, उसले जीवनमा …
१५ पुस बिजौरी । एक तमासको छ मन । किनकि आज धेरै समयपछि सम्झिने समय मिलेको छ । जिन्दगी यसरी बितिरहेको छ कि फर्केर हेर्नका लागि कुनै अवसरको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो अवसरको सदुपयोग गर्दै आज जिन्दगीका पानाहरु पल्टाएर चिहाउने मौका मिलेको छ तर त्यहाँ नराम्रो अक्षरहरु देखेर …
कसरी भनुम दिन रात काम गरेर महिना मर्दा पैसा नहुँदाको पीडा अनि कसरी भनुम दिउँसभर ओ हो पत्रकारज्यु आउनुस् चिया खाउ भनेर कसैले भन्दा मन भरी चियाको तल्तल लाग्दा नि मैले चिया खान छाडें सर भनेर हिड्दाको पीडा यो सबैको कारण पैसामा नै जोडिँदो रैछ । गाडिमा पाँच मिनेटको बाटोलाई …
मुलुक संकटले घेरिएको छ, यो अवस्था ल्याउनमा जो कुनै प्रकारले उत्तरदायी छैन, तर कुनै पनि अछुतो छैन । किनकि यो अवस्था ल्याउन राजनैतिक दल, संघ संस्था, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन् जति राजनीतिक दल छन् । यस्तो संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रदै गरेको, कहाली लाग्दो दिनको प्रत्यक्ष प्रभाव युवा वर्गले …
आमा त्यागको खानी, बुवाको परिश्रम
२६ मंसिर, तुलसीपुर/ आज मैले हाम्रो समाजमा रहेको समाजिक कुसंस्कृतिको बारेमा आफुले जानेका केही कुराहरू आमाबुवा, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूलाई बताउन गईरहेको छु । मैले लेखेको कुरा पढ्दै गर्दा कतिपय व्यक्तिहरूलाई आफ्ना आमाबुवाको याद पनि आउँन सक्छ । अनि कतिपयलाई भने आफ्नो आमाबुवालाई बृद्धाआश्रमबाट लिएर घरमै राखुँ भन्ने सोच आउँन सक्छ …
मैले अहिले ठुला कुरा लेख्दैन, तिहार आउंदा मलाइ माइलिदिदिको झझल्को आइरहेको छ । उनै माल्लििदिदिलाइ तिहारको टिका थाप्न म प्युठानको भित्रिकोट पुग्थे, तर उनी माइलिदिदिको झझल्को आइरहेको छ । तुलसीपुरका आत्मिय ललित घर्तिले दिएको ५ सय रुपैयाले म त्यहांबाट सार्वजनिक बसमा चढेको थिएं, अर्जुन न्यौपानेलाइ भेट्न घोराही । मैले चढेको …
१. लमहीमा ट्रमा सेन्टरको स्थापनाका लागि ४० करोड बजेट विनियोजन२. राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शैया बनाउन बजेट, ६ सय शैयाका लागि गुरुयोजना३. प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा मिनी सिहंदरबार वैद्य खानाका लागि बजेट४. बेलझुण्डीमा योग प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालको गुरुयोजना माथि उल्लेखित उदाहरणहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्न थालेको आभास तुल्याउँछ । नेपालको …
१. प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको बिजौरी, हाडिमे, छिल्लीकोटसडक निर्माणमा विवाद२. प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको दामोदर मार्गअन्र्तगत रहेको चिराघाट खोलाको पुलनिर्माणका क्रममा विवाद हुँदा एक वर्ष विलम्ब३. शान्तिनगर गाउँपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बिच रहेको बागर खोलामापुल बने पनि तीन वर्षसम्म विवाद नै रह्यो । यी तीन वटा …
« अघिल्लो पृष्ठ 1234… 14 अर्को पृष्ठ »